Ukuzenzela iiNkonzo kunye neeNjini zokuKhangela | Martech Zone
Ukuzenzela iiNkonzo kunye neeNjini zokuKhangela
NgoMvulo, Novemba 12, 2012 NgoMgqibelo, Novemba 10, 2012 Douglas Karr
Enye yeendlela zokuphucula ukugcinwa kwabathengi kunye nolwaneliseko lwabathengi ngokubanzi kukuvelisa umxholo onceda abathengi bazincede. Ayisiyiyo kuphela inkqubela kulwaneliseko lwabathengi, kukho ukonga iindleko ngokuthe ngqo okunxulunyaniswa nabathengi abangazibopheleliyo kwimigca yeenkonzo zabathengi bakho. Ukupapasha isiseko solwazi lwakho, imibuzo ebuzwa rhoqo, ii-snippets kunye nemizekelo apho iinjini zokukhangela ezinokuzifumana zenza ukuba oku kwenzeke-kungazibeki emva kokungena ngenxa yokoyika abo bakhuphisana nabo ukubafumana.
Izifundo zamva nje zisixelela ukuba abathengi abaninzi nangakumbi bakhetha ukuzenzela inkonzo kunokunxibelelana nearhente yenkxaso; kwaye njengoko kuboniswe ngezantsi kwi-infographic, i-whopping engama-91% bathi baya kusebenzisa isiseko solwazi ukuba iyazifezekisa iimfuno zabo. Ezi ziindaba ezimnandi kumashishini; Ukuzenzela inkonzo yeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ichanekileyo yokuxhasa abathengi. Ukuphuculwa kweZintesk's infographic Khangela iNkonzo yokuZisebenzela ngokwakho eNengqondo
tags: ukwaneliseka kwabathengiInkonzo eyenzelweFAQsinkonzo yomntu
Nov 12, 2012 ngo-3:23 PM
Yinto eyonwabisayo le! Ezinye iimpendulo ezikhawulezayo kumfana owenza ulawulo lolwazi kunye nokuzenzela inkonzo ukuze aziphilise:
1. Kuyamangalisa ukuba i-Oracle icatshulwe kwicandelo malunga ne-SEO kunye nokwabelana ngomxholo wakho ngokusebenzisa iinjini zokukhangela zewebhu, njengoko zingumzekelo ophawulekayo wenkampani ye-B2B ENGAbelani ngomxholo wesiseko solwazi ngeGoogle et al. Okungcono okanye okubi, bavala umxholo wabo we-KB emva kokungena kwabo
2. Idatha yam ihluke kakhulu, iphantsi kakhulu - kune "40% iya kufowunela iziko loqhagamshelwano emva kokuzisebenzela." Ukuba ucinga ngamava akho e-B2C kwi-Amazon, iMicrosoft, njl., uyabona ukuba le yimiyalelo yobukhulu obuphezulu kakhulu. Kodwa nakwiindawo ze-B2B, umthamo kwiwebhusayithi ngu-10x - 30x umthamo kwiziko lokuxhasa, okanye ngaphezulu.
3. Ndicinga ukuba uGartner akalunganga malunga nee-arhente zenyani. (70% enokwenzeka) 🙂
Nov 12, 2012 ngo-4:17 PM
Emva kokuba iPenguin&Panda ihlaziye umxholo uyinkosi. Ukupapasha isiseko sakho solwazi kuya kwandisa i-SEO yakho